Indianapolis Kushambadzira & Bhizinesi Book Kirabhu | Martech Zone
Indianapolis Kushambadzira & Bhizinesi Book Kirabhu
Muvhuro, Nyamavhuvhu 14, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nhasi pamasikati ndakasangana nevazhinji vandaishanda navo kuti titaure Kukurukurirana Wakashama. Isu takave neboka rinoshamisa revanhu vanomiririra maindasitiri mazhinji: zviri pamutemo, kudyidzana neruzhinji, terevhizheni, telecommunication, internet, kushambadzira email, mitambo, varaidzo, ruzivo rwehunyanzvi, kushambadzira uye kutsikisa!
Kwete zvakaipa kwekutanga kuratidza!
Vazhinji vedu takaverenga zvizere Kukurukurirana Wakashama, mamwe aive chikamu mukati maro, uye vashoma vanga vanyatso shandisa zvimwe zvemashoko kubva mubhuku. Vandinoshanda navo vanogona kunzwa vakasununguka kutenderera mukati kana vachida, asi heino mafungiro angu ezvekudya kwemasikati, mhinduro pabhuku, pamwe nekublogi kazhinji.
Blogging inogona kunge isiri yemakambani ese. Kana usiri kuzove pachena, unogona kukuvadza zvakanyanya kune yako kambani pane zvakanaka.
Vatengi vako vari kuzoita hurukuro newe kana pasina iwe. Wadii kuyedza kudzora iko kutungamira kweiyo hurukuro nekuve wekutanga kublog nezvazvo? Iyo meseji forum inomirira kuti vatengi vako vabvunze. A blog ndiyo yako mukana wekutaura usati wabvunzwa.
Mabloggi marongero haana basa. Kana vashandi blog, kuwedzera zvisina kukodzera posvo hakuna kukuvadza pane kuzvitaura muemail, kana pafoni, kana mukukurukurirana. Vashandi vanozvidavirira kune zvavanotaura kuburikidza nechero nzira. Kana iwe uri blogger… kana usina chokwadi, bvunza! (Semuenzaniso: Ini handina kukumbira mvumo kubva kuboka kana ndikakwanisa kunyora mazita avo, makambani, makomendi, nezvimwewo saka handisi kuzoenda pano)
Zviwanikwa zvaive kunetsekana uye nemusoro wehurukuro. Nguva iripi? Nderipi zano? Ndeupi meseji?
Zviri nyore kublogi, asi iwe unofanirwa kudzidza kudzika matekinoroji ari kuseri kweblog rako… RSS, zvinongedzo, trackbacks, pings, makomendi, nezvimwe.
Kana blogging ichiendeswa sechirongwa, chii chiri kudzoka pane kudyara? Iyi yaive hurukuro yakanaka. Ini ndinofunga kubvumirana kwese kwaive kuti hakuchisiri sarudzo uko kudzoka kwekudyara kunofanira kuongororwa… chiri chishuwo uye kutarisira kubva kune vatengi vako kuvhura iyi mitsara yekutaurirana. Zvikasadaro, ivo vanongo enda kumwe kunhu!
Kana iwe uri bhizinesi, kushambadzira kana tekinoroji nyanzvi munzvimbo yeIndiapolis uye uchida kujoina nesu kune yedu Book Club, ingo nyora pa Ini Sarudza Indy! uye tumira nyaya yako pane chikonzero nei wasarudza Indianapolis. Tichakuisa muemail yedu yekuparadzira ine zita rebhuku rinotevera ratichaverenga uye kuti tichaitevera riini.
Pane parutivi noti, Shel Israel aive nerwendo rwekutarisa rwakamiswa uye akavhurika kuti aite zvekubvunza. Sezvaanotaura, Ini Ndinozobvunza kune Yekubhadhara Mari. Kutenda kwakakosha kuna VaIsrael nebhuku ravo uye nekukurudzira vanhu vakati wandei muno muIndiapolis kuchera mune uyu mukana isu pachedu nevatengi vedu. Tine chikwereti chakanyanya kudarika mutengo wemabhuku!
Kutenda kwakakosha kuna Pat Coyle nerupo rwake pakuronga kuungana kwedu kwekutanga pamwe neMyra yekutambira kirabhu yedu uye nekupa masikati akanaka!
PS: Zvakare nekutenda kumwanasikana wangu, takanonoka kunyoresa mukirasi. Uye nekutenda kune wandinoshandira, uyo akandicheka zvishoma kumanheru!
Tags: Shel Israeri
My 10 Matipi ekugadzirisa yako Blog
Aug 14, 2006 na10:02 PM
Doug, iwe zvirinani utarise yedu Shel Israel ichave ichikubvunza iwe zano!
Aug 14, 2006 na11:53 PM
Ndatenda nemazwi emutsa uye plug yebasa, Doug. Zvinoita senge kirabhu hombe yebhuku uye zviri kunetsa kuona akawanda ezvinyorwa zvakakosha zvebhuku zvichikurukurwa uye kushandiswa.